I-SEO Buddy: Uhlu lwakho Lokuhlola lwe-SEO Nemikhombandlela Ekwandiseni Ukubonakala Kwesikhundla Sakho se-Organic | Martech Zone
The Uhlu lokuhlola lwe-SEO ngu-SEO Buddy is umgwaqo wakho womgwaqo kuzo zonke izenzo ezibalulekile ze-SEO udinga ukuthatha ukwengeza iwebhusayithi yakho futhi uthole ithrafikhi ethe xaxa. Le yiphakheji ebanzi, ngokungafani nanoma yini engake ngayibona ku-inthanethi, ilusizo olukhulu kubhizinisi elijwayelekile ukubasiza ngokuqhubekayo nokwandisa amasayithi abo nokukhulisa ukubonakala kwabo kusesho.
Uhlu lokuhlola lwe-SEO lubandakanya
Uhlu Lokuhlola lwe-Google olungu-102-Point SEO Sheet
Uhlelo Lokusebenza Lokuhlola Uhlu lwe-102-Point SEO
I-eBook enamakhasi angama-62 (PDF)
Indlela yekhalenda lokuhlela okuqukethwe amasonto angama-52 (PDF)
Uhlu lokuhlola lokusabalalisa okuqukethwe olunamaphoyinti angama-50 (i-Google Ishidi)
Izinqubo zokusebenza ezijwayelekile ezingaphezu kwama-40 (SOPs) okufanele uzilandele.
Uma umusha ku-SEO futhi udonsa kanzima, i- Uhlu lokuhlola lwe-SEO izokusiza uqonde isithombe esikhulu salokho okudingeka ukwenze ukuze ulungiselele futhi ubeke isiza endaweni efanele. Ngohlelo lokusebenza nangamaspredishithi, uzokwazi ukulandelela onakho futhi ongakwenzanga ukuze ungaphuthelwa noma yimaphi amaqhinga abalulekile.
Akukhona nje uhlu lwamaphoyinti ezinhlamvu, noma. Uhlu lokuhlola luza nemibhalo enemininingwane, yesinyathelo ngasinye ukuze uqonde kahle ukuthi ungasenza kanjani isinyathelo ngasinye.
Lokhu akukhona ukuthenga kwesikhathi esisodwa, noma! I-SEO iguquka njalo lapho uthenga i Uhlu lokuhlola lwe-SEO, uzothola ukufinyelela impilo yonke kufaka phakathi zonke izibuyekezo ezizayo mahhala.
Uma uzimisele nge-SEO, lokhu kuyinsiza enhle. Engikuthandayo ngakho ukucaciseleka okutholayo. Kufana nokuzama ukwenza iphazili bese ubona isithombe okokuqala ngqa. Uyazi ukuthi yini okudingeka yenziwe.
ULouise Green, Obhalisile
Izindawo ezibhekiswe ekuhlolweni kwe-SEO
Njengoba izinjini zokusesha seziguqukile, kunezindawo eziqondiwe ezahlukahlukene okufanele ugxile kuzo uma unethemba lokusebenzisa ngokuphelele ithrafikhi ephilayo yesayithi lakho noma isitolo:
Foundation - Ungayisetha kanjani i-analytics, ulandelele amagama akho angukhiye, futhi ulandele amamethrikhi ku-Google Search Console.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi - IGoogle ikhathalela ulwazi umsebenzisi we-search engine analo lapho efika kusayithi lakho, ngakho-ke kufanele uthuthukise lolo lwazi.
Okuqukethwe - Uma udala okuqukethwe okuhlukile, abantu bazokwabelana ngakho, amasayithi ekhwalithi azoxhumeka kukho, futhi iGoogle izokuklelisela lokho.
Performance - Funda ukuthi ungenza kanjani isiza sakho sisheshe ukuze yonke into ilayishe ngokushesha. I-Google iyawathanda amawebhusayithi asheshayo.
Ekhasini SEO - Ikhasi ngalinye kusayithi lakho kumele kube lula ukuthi izinjini zokusesha zikhase ukuze zikhombe kahle futhi zisetshenziselwe izivakashi ukuzulazula kuzo.
I-Off-Ikhasi le-SEO - Dala ukuqwashisa ngewebhusayithi yakho bese uqoqa izixhumanisi zenani eliphakeme ngokufinyelela nakwabezokuxhumana ukuze ushayele igunya lakho.
Ubuchwepheshe be-SEO - Gwema izingibe ezivamile ezivimbela izinjini zokusesha ukuthi zithole futhi zikhombe isiza sakho ngendlela efanele.
SEO Local - Lungiselela ukufakwa kuhlu kwakho kwasendaweni kuzinjini zokusesha kanye nezikhombisi-ndlela ezibalulekile lapho zombili izinjini zisebenza ukuqinisekisa imininingwane yakho nokuthi abasebenzisi bazo bakuthola kuphi.
Lokhu akuyona inkambo eku-inthanethi! Uhlu lokuhlola lwe-SEO luyimephu yomgwaqo nohlu lokuhlola oluya empumelelweni ye-SEO ngakho konke okuqukethwe okudingayo ukuze uzuze imiphumela ephezulu ye-SEO!
Sebenzisa ikhodi yesaphulelo engu-MARTECHZONE
Uma ufuna i-25% isuswe kuzindleko zohlu lokuhlola lwe-SEO, sebenzisa ikhodi UMARTECHZONE lapho uphuma! Uzothola amanye amabhonasi angeziwe ekuphumeni.
Thenga Uhlu Lokuhlola lwe-SEO nge-SEO Buddy
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-SEO Buddy.
Tags: ikhodi yesaphuleloIspredishithi se-googleseo sendawoisayithi seoesizeni seousezingeni lokusesha le-organicabasebenzisi benjini yokuseshausesho lomsebenzisiumngane wakhouhlu lokuhlolaukuhlelwa kokuqukethwe kwe-seoizinkomba ze-seolokho umhlahlandlelaukuhlela lokhoseo ukuqeqeshwatechnical lokho